CBD kurongedza, Glass Droper Bottle, 60ml E-liquid Bottle, CBD Balm chirongo - ANKE
CBD Bharamu chirongo
CBD girazi chirongo
Unicorn Eliquid Mabhodhoro
Dzorerazve (DIY) Bhodhoro Remvura
V1 Screw Matipi
V3 Screw Matipi
Bhokisi Uye Pepa chubhu
Humwe Hupurasitiki Bhodhoro
ANKE kurongedza Co., Ltd.
Kugamuchirwa kuti utitumire yako zvakadzama zvinodiwa. Ipapo tinogona kudzorera yako chaiyo kupihwa uye zvimwe zvakadzama info base pane zvaunoda…
Girazi girazi rine bamboo cap-ANKE Kurongedza
Amber girazi chirongo nealuminium cap-ANKE Kurongedza
Une CBD Balm / Cream ine ruvara rwakatsvuka here? Uri kufunga kuti nderipi jira rinokodzera zvigadzirwa zveCDD? Ruvara rweamber ndiyo sarudzo yakanakisa izvozvi. Iyo semi-yakajeka, vanhu vanogona kuona zvigadzirwa zvemukati. Uye amber ruvara runogona kuita kuti zvigadzirwa zvemavara zvioneke zviri nani. Vanhu ca ...
Gadzirisa Kudhinda CBD Aluminium Shinny Plastiki Bhegi-ANKE Kurongedza
Nezuro, takaunza iyo yekudhinda kraft bepa bhegi kune Solid CBD. Takataura izvo kune zvimwe zvakapusa mifananidzo yehemp nemaruva. Izvi zvinhu zviri nani sarudzo. Asi ko zvakadii kune mamwe mavara emifananidzo? Aluminium Shinny Plastic zvinhu zviri nani. Unogona kutarisa mufananidzo kuti uone. Iyo ...
Kudhinda Kraft bepa bhegi kubva ANKE Kurongedza
Bhegi kurongedza kunoshandiswa zvakanyanya kweCBD Zvigadzirwa. Mbeu, maruva, chikafu uye zvimwe zvigadzirwa zvakaomarara, izvi zvese zvinogona kurongedzwa muhomwe. Kraft bepa bhegi isarudzo yezvinhu. Heano mamwe emashoko echinhu ichi: Bhegi risina kudhinda: Tine imwe inopisa kupisa saga bhegi mudura nguva dzese. Unogona ...
Sirinji yehuwandu hwakazara CBD Oiri
Mazhinji maCDD eBD anogadzira epamusoro giredhi CBD oiri ikozvino. Une chirongwa ichi here? Aya epamusoro zvigadzirwa zvigadzirwa zvinorongedzwa mune yepamusoro-magumo kurongedza. Iyo Luer Lock sirinji ndiyo yakanyanya kunaka sarudzo. Sirinji yedu yakagadzirwa negirazi izere, ine hushamwari uye nharaunda. Izvo zvinhu ndeyekurapa giredhi. Unogona kurongedza chero oi ...
Pepa Tube reCDD Tincture Bhodhoro
Dhinda Hemp pane chivharo cheCBD Jar-ANKE Kurongedza
Kusvika parizvino, takataura nezve akasiyana cap mhando yeCDD chirongo. Kune hovhosi yemishenjere, chivharo chepurasitiki uye chivharo chealuminium. Isu takataurawo nezvetsika cap chivara. Kune bamboo cap, tinogona kuita rima bamboo, light bamboo. Uye kune iyo chivharo chepurasitiki, tinogona kuchinjira kune rakasiyana ruvara. The aruminiyamu chivharo inogona customized t ...
Dzosera HEMP & CBD EXPO
Rimwe zuva kubva pashoo! Wagadzirira here kuratidzira？ Parizvino tiri kurongedza dumba redu nekugadzira zvigadzirwa kuti iwe ushanyire. Zvese zvigadzirwa zvinoratidzwa: epurasitiki / girazi CBD bhodhoro, mapurasitiki / magirazi emidziyo ine sikuruu cap, isina kudzivirira cap, aluminium cap, aluminium kesi ne ...
Girazi chirongo-HEMP & CBD EXPO
Kune chirongo chakasiyana kana ichienzaniswa nemazuva akati wandei apfuura mune mbishi zvinhu. Tine hukuru hwakasiyana hweichi chirongo. Iyo chivharo chechirongo chivharo chisina mwana, zvinonyanya kuchengetedzeka kuvana. Uye zvakare ndiwo maitiro makuru mumisika yeCBD. Mavara anogamuchira yakasarudzika sevhisi. Unoda kudzidza zvakawanda nezve iyo chirongo? Kumirira f ...
Pop Vials Ine Yevacheche Cap-HEMP & CBD EXPO
Plastiki Yekusachengetedza Vial-HEMP & CBD EXPO
Takataura nezveplastic bag nguva yadarika. Iko kurongedza kusingaite kwevana kune yakasimba CBD Zvigadzirwa. Tine kumwe kurongedza kwechigadzirwa chakasimba-Kwevacheche Vial. Tine 30ml, 50ml, 60ml, 80ml, 120ml, 160ml, 240ml vial yaunosarudza. Unogona kurongedza mbeu, maruva kana zvimwe zvigadzirwa zvakasimba mune iri vial. The c ...
Yevana isina bhegi-HEMP & CBD EXPO
Panguva yekugadzirira iyo CBD EXPO, isu ANKE Kurongedza (www.ankepacking.com) zvakare kusangana neumwe mugadziri weCBD kuti adzidze kurongedza kwavari kushandisa, uye nezvavanoda kutsvaga. Vazhinji vavo vakatiudza kuti vanosarudza kurongedza zvisina kuchengetedzwa nemwana. Ichave chengetedzo kuvana, uye izvi zvakare zvichave zviri tsika yei ...
10ml epurasitiki CBD Bhodhoro-HEMP & CBD EXPO
Girazi CBD Bhodhoro-HEMP & CBD EXPO
Uri kubatikana kugadzirira HEMP & CBD EXPO. Nhasi, isu tapedza kugadzira yemuenzaniso runyorwa. Iwe unoda here kuziva izvo isu zvatinogadzirira zvakanyanya izvi EXPO? Iyo yakakomberedza CBD Girazi bhodhoro. Isu tinogadzirira 10ml, 15ml, 30ml, 60ml, 100ml uye 120ml mabhodhoro. Kune iro ruvara, isu tine yakajeka, bhuruu, amber, girini, mat bl ...
Plastiki Jar-HEMP uye CBD Expo
Enda shure kwekutarisa!
Runhare: +86 185 3314 1341
Kero: Chikamu Chechipiri, Xiaogang mingzhu Beiheng Road, Baiyun District, Guangzhou City, China.